imanoela fifaliana · Mey 2019 · Global Voices teny Malagasy
imanoela fifaliana · Mey, 2019
Lahatsoratra farany an'i imanoela fifaliana tamin'ny Mey, 2019
Amerika Latina05 Mey 2019
Teny Faneva (taglines): Inona izy ireo ary ahoana no ampiasana azy
Mediam-bahoaka05 Mey 2019
Tsy voatery asiana ao amin'ny tantara GV ny tenimarika, fa ny teny kapoka tsara iray. dia afaka manamafy ny firotsahana ao anaty tantara iray amin'ny fisintonana ny fahalianan'ny mpamaky.
Toby Rosiana Fanibohana ny Rakitr'ireo Tambajotra Sosialy Amerikana?
Rosia05 Mey 2019
Mampiroborobo ny volavolan-dalàna iray izay mitaky ireo tambajotra sosialy rehetra mba hampiantrano ny rakitr'ireo mpampiasa azy ao anaty lohamilina miorina ao amin'ny tany Rosiana ny mpanolotsaina iray ao amin'ny tanànan'i Moskoa:
Tanànan'i Mexico : Midina An-dalambe Manohitra ny #LeyTelecom Ireo Olom-pirenena
Meksika03 Mey 2019
Tany Meksika, nanao fihetsiketsehana ho an'ny Aterineto ho an'ny daholobe izay manaja ny tsy fitanilàn'ny Aterineto sy ny fahalalahana maneho hevitra ireo mpanao fihetsiketsehana.
Shina: Fenitry ny vozon'akanjo fotsy
Azia Atsinanana01 Mey 2019
Ao anatin'ny tontolo Sinoa, mifandray amin'ny fomba fiainana mendrika sy mampitsiriritra ny vozon'akanjo fotsy. Ohatrinona no vola tsy maintsy azonao vao azo hosokajiana ho toy ny mpiasa manana vozon'akanjo fotsy ianao any Shina? Manome fenitra ofisialy ho an'ny olona ny tatitra vao haingana navoakan'ny Akademia Sinoa ho an'ny Siansa Sosialy.